ပရိသတ်ပေါင်း ၆ သိန်းကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း | Duwun
ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က ပြည့်သွားခဲ့တာပါတဲ့။
ယွန်းယွန်းတစ်ယောက် သူ့ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ် ၆ သိန်းကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်တာကြောင့် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့ နေပါတယ်. သူမ ကိုတော့ ကလေးသရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ်ကတည်းက အားပေးလာကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အများကြီးပါ.
ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးလေး ယွန်းယွန်းက ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ မှာပဲ သူ့ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ် ၆ သိန်းကို ပိုင်ဆိုင်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်. ဒီ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့ နေပါတယ်.
'' 600,000 followers!!! Woahh.. thank you so much '' ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် ယွန်းယွန်းကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း Comment ကနေ တဆင့် ဘယ်လောက်ထိ ချစ်တယ် ဆိုတာ တွေကိုလည်း ပြောပြထားကြပါသေးတယ်.
ယွန်းယွန်းက အခုလက်ရှိမှာ အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အဲ့ဒီနောက် ''တိမ်မင်းသမီးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့လည်း ကလေးသရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီဆုကို ရရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုချိန်မှာတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာရှိသေးတာကြောင့် သူနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ကာရိုက်တာကိုပဲ ရွေးချယ် ရိုက်ကူးသွားမယ်လု့ိDuwun အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။